?Waxaa la ugaarsanayaa nin doorkii, suurtaganla ma?aha in dawladdu meel kasta askari dhigto? M/weyne ku xigeenka Puntland. – Radio Daljir
Bossaso, Apr 26 – Madaxweyne ku xigeenka Puntland C/sammed Cali shire ayaa maanta (Salaasa) sheegay in la ugaarsanayo oo la laynayo nin doorkii Puntalnd, aysanna suura-gal ahayn in meel kasta dawladdu askari dhigto.
Isagoo ka hadalayey shir jaraa?id oo ku qabtay garoonka diyaaradaha ee Bardar-qaasim ee magaalada Bossaso ayuu sheegay in tani aysan ahayn wax la qaadan karo, si looga hortagana loo baahanyahay in dad waynuhu dawladda kale shaqeeyo nabadda.
?Tuugo kula taal kaama tab waydo? ayuu yiri Madaxweyne ku xigeenku taas oo micneheedu yahay in dambiile kula daggan aan la iska ilaalin Karin ayna waajib tahay in la is kaashado.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa sidoo kale ka hadlay abaaraha ba?an ee ka jira dalka Somaliya gaar ahaan PL, waxaana u rajo ka muujiyey roobabka Gu?ga oo ka curtay meelaha qaar iyo inay dadku isku tashadaan.
Generalka oo labadii maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa Bossaso ayaa u duulay magaalada Dubia, ka dibna u sii gudbaya dalka Mallesia.
Xassan Cabdi Faray,
Daljir, Bossaso http://daljir.com/